Hultqvist: Qandaraasku wuxuu abuuri karaa goobo shaqo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Peter Hultqvist, S wasiirka difaaca Sweden. sawir: Jonas Ekströmer/TT, Jeff Roberson
Hultqvist: Qandaraasku wuxuu abuuri karaa goobo shaqo
La daabacay fredag 28 september 2018 kl 14.31
Wasiirka difaaca Sweden, Peter Hultqvist oo wax laga weeydiiyay qandaraas ey wada jir ugu guuleeysteen shirkadaha Boeing ee mareeykanka iyo SAAB ee iswiidhishka ayaa sheegay inay calaamad u tahay sumcadda wanaagsan ee teknoloojiyada dalka.
– Waxay muujineeysaa heerka teknoloojiyada Sweden gaarsiisan tahay, iyo in laga qiimeeyo caalamka. Sidoo kale waa qadarin loo hayo shirkadda SAAB ee dayuurradaha sancadeeysa. Waxaa sidoo kale suurtagal ah inay dalka ku soo kordhiso goobo shaqo oo hor leh, sida uu sheegay Hultqvist.
Qoraal saxaafadeed oo ay shaacisay shirkadda SAAB fiidnimadii xalay inuu qandaraaska ey shirkaduhu ku guuleeysteen uu qiimihiisu yahay 9 bilyan oo doolar, una dhiganta 80 bilyan oo koronka iswiidhishka ah. Waana qandaraas kor u sii kici kara maadaama ay qeybo kale oo ka mid ah hayadaha difaaca mareeykanu u baahdaan dayuurrado duulimaadyada lagu barto.
Amuurtan ayaa la sheegeyaa inay sabab u noqotay kor u kac ku yimid saamiga waraaqaha ganacsiga ee shirkadda Saab qiime dhan 25 bilyan oo koron guud ahaan. Hase yeeshee waxaan caddeeyn tirada goobaha shaqo ee qandaraaskani u horseedi doono xarunta shirkadda Saab ee magaalada Linköping, maadaama howlaha badankood lagu qaban doono dalka Mareeykanka.
– Waa tallaabo wax wayn ku soo kordhin doonta shirkadda SAAB, hase yeeshee Linköping ahaan maxaa ku soo kordhi doona waa mid mustaqbalka la arki doono, maadaama aan illaa hadda wax laga og yahay aanay jirin, sida uu sheegay Anders Danielsson, guddoomiyaha ururka shaqaalaha Unionen ee shirkadda SAAB ee magaalada Linköping.
Kolka laga hadleyo dalabaadka qalabka difaaca waxaa xaqiiq ah iney isku xiran yihiin siyaasadaha difaaca iyo ammaanku.
– Waa xaqiiq inay adkeenayso xiriirka, waxaa iyaduna jirta in aannu leennahey xiriir muddo dheer soo jiray ee qalabka la xiriira, waana xiriir qiime inoogu fadhiya. Sidoo kale waanagii go’aansanney in aannu ka soo iibsanno dalka Mareeykanka rakeetyada difaaca hawada, sida uu sheegay wasiirka difaaca Sweden, Peter Hultqvist.